युरिक एसिडको मात्रा बढे बाथरोग लाग्छ : डा.दिपा शाह
२७ असार २०७६, शुक्रबार ११:२९
शरीरको रोग निरोधक शक्ति वा इम्युनिटी सिस्टममा गडबडी भएपछि बाथ रोगले संक्रमण गर्न थाल्छ । यो जुनसुकै उमेर र लिंगका व्यक्तिमा पनि लाग्न सक्छ । वरिष्ठ फिजिसियन तथा बाथरोग विशेषज्ञ डा.दिपा शाहका अनुसार बाथ रोग कुनै एक कारणले मात्र हुँदैन ।
रगतमा युरीक एसिडको मात्रा बढे ,वंशाणुगत गुण आमा बुबामध्ये एक जनालाई बाथ रोग छ भने बच्चामा पनि बाथ हुन सक्छ । खानपान रुघाखोकी,भाइरल इन्फेकसन ,एलर्जी झाडापखाला आदिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाइ बाथरोग हुने जोखिम हुन्छ ।
बाथ रोग कुन किसीमको हो त्यसमा भर पर्छ । बाथ रोग २ सय भन्दा बढी छन् । यसका असर फरक छन् हातखुट्टा दुख्ने,ढाडको जोनी दुखने, शरीरको जोर्नी दुख्ने ,जोर्नी सुनिने,बिहान उठ्दा कक्रक हुने,बाथले शरीको कुन अंगमा असर गरेको हुन्छ त्यो अनुसारका लक्षणहरु देखा पछन । कसैकसैमा खोकी लाग्ने ,दम देखिने पिसाबमा फिज आउने,मुटुमा बाथ भएमा मुटुको चाल बिग्रने मष्तिस्कमा असर गरेमा मृगृ रोग देखिन जस्ता लक्षण हुन्छ ।
माािसमा बाथ रोग भएमा आँखा पाक्ने,दृष्टि गुम्ने,ज्वरो आउने,काम गर्न मन नलाग्ने,जिउ आलस्य हुने जस्ता समस्या हुने गर्छन ।
मेडिकल साइन्सले बाथरोग लाग्नै नदिने उपाय हालसम्म पता लगाएको छैन । यो रोग लाग्नै नदिन भ्याक्सिन र औषधिहरु प्नि छैनन त्यसैले परिवारका कुनै सदस्यलाई बाथरोगका लक्षण देखिएमा सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
बथरोग भएको पता लागेमा सेकेन्डण्री प्रिभेन्सन अपनाई जटिलतालाई रोक्नतिर लाग्नु पर्छ ।
युरीक एसिडको बाथमा केहि खाने कुरामा विशेष ध्यान दिर्नुपर्छ ।
बाथ रोगको उपचार बाथरोगको किसिममा भर पर्छ । बाथ रोग अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ ।
दुखाइ कम गर्ने सुनिन कम गर्ने डाक्टरले दिएको औषधि खानुपर्छ ।
समय समयमा रोगको कडापन हेरी औषधिको किसिम र मात्रा फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
रगत,एक्स रे लगाएतका परिक्षण समय समयमा गर्ने आफुखुसी बाथ रोगको औषधि नखाने । चिकित्सको सल्लाह बमोजिम उपचार गर्ने ,गर्नुपर्छ ।
वर्षायाममा बालबालीकालाई संक्रमण हुनबाट यसरी बचाउ
जंकफुड धेरै खाने बालबालिकाले घरमा खाना खानै मान्दैनन् – बालशल्य चिकित्सक आपी चौधरी (भिडियो)
बच्चाको दाँत कीरा लाग्नबाट यसरी बचाउन सकिन्छ: ओरल एण्ड म्याजीलोफेसल सर्जन विकास देसार (भिडियो)
मिगौलामा पत्थरी किन हुन्छ ? युरो सर्जन डा.पारसमणि श्रेष्ठ
गर्भवति महिलाका लागी पनि आवश्यक छ फिजियोथेरापी डा. नविना श्रेष्ठ
अप्रेसन गर्नुपर्ने डरले विरामीहरू होमियोप्याथिकमा उपचार लिन आउँछन् : डा.प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय (भिडियो)
दुई सुन्दरी नायिका संग मस्किदै भद्रगोलका खुपीको बाले मनाए जन्मदिन (भिडियो सहित)
३१ असार २०७६, मंगलवार १९:२४
गायिका ज्योति मगरको आह्वान – ‘मसँग विवाह गर्ने कोही छ भने सम्पर्क गर’ (भिडियो)
उनी रोए किनकि मन मिलेर बिहे गरेको मान्छेको उनले कानको जाली फुटाए‍‍‍…
घुन्सा फाउन्डेसनको अध्यक्ष याङजोम शेर्पा नेपाल ट्रष्टको संचालक समिति सदस्यमा मनोनित
छोरीप्रतिको विभेद हटाउन बन्ने भयो चलचित्र ‘बधाई हो बेटी हुई हे’